को हुन् रुपा सुनारको मुद्दा दर्ता गर्न नमान्ने इनिस्पेक्टर सुवेदी ? यस्तो छ कालो कर्तुत - Kantipath.com
गणेश बिक / काठमाडौं । ‘जो अगुवा, उही बाटो…’ भएपछि कसको के लाग्छ र ? महानगरीय प्रहरी बृत्त सिंहदरवारमा कार्यरत इनिस्पेक्टर विक्रम सुवेदी नै कानुन उल्लंघनका पात्र बन्दा छुवाछूत जस्तो जघण्य अपराधको मुद्दा दर्ता गर्न पनि निक्कै धौँ धौँ परेको छ ।
Previous Previous post: अनुसन्धानमा अब्बल भन्दै कपिलवस्तुका एसपी अधिकारी प्रदेश प्रहरीद्वारा सम्मानित
Next Next post: कोपा अमेरिका : अर्जेन्टिनाले पाराग्वेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै
काठमाडौंँको रात्रि जीवन : डान्स, दोहोरी, र क्याविन कार्यरत महिला श्रमिक एकै दिनमा १७ जनासँग सहवास
प्रहरी समायोजन प्रस्ताव स्वीकृत, अब यसरी हुन्छ प्रदेशमा प्रहरी समायोजन
६ महिने प्रतिबन्धमा के के भए विप्लव नेकपा भित्र?
जनैपूर्णिमा पर्वका अवसरमा गोसाइँकुण्ड स्नान गर्न हजारौ भक्तजन प्रस्थान